Fifindra-monina tsy ara-dalana :: Hikaroka an’ireo mpiondrana an-tsokosoko ny fanjakana malagasy sy kaomôriana • AoRaha
Miha mitombo ny isan’ireo mpifindra monina tsy manana taratasy ara-dalàna miondrana any Kaomôro na mankaty Madagasikara. Hokarohina izy ireo ka ao anatin’ny fe-potoana sivifolo andro. Nanomboka afak’omaly no hanaovan’ny fanjakana malagasy sy kaomôriana izany, araka ny kabary nataon’ny Praiminisitra, Ntsay Christian, tany Moroni (Kaomôro) afak’omaly.
“Samy hanisa an’ireo sokajin’olona ireo ny fanjakana roa tonta ka haverina any amin’ny firenena niaviany izay tsy manana taratasy fifindra-monina ara-dalàna. Manasa an’ireo Malagasy monina aty Kaomôro aho mba handray anjara mavitrika amin’ny fanisana hatao. Tahaka izany koa ianareo Kaomôrianina monina any Madagasikara. Izany no hatao dia mba hahafahana manana antontan’isa mazava momba an’ireo mpifindra monina satria fomba iray hahafahana misoroka ny fanondranana olona an-tsokosoko io paik’ady io”, hoy izy.
Nisy ny taratasy nosoniavin’ny Praiminisitra, Ntsay Christian sy ny minisitry ny Raharaham-bahiny kaomôrianina, Souef Mohamed El-Amine, tany Moroni, manamarina an’io fifanaraham-piaraha-miasa io.
Fiarovana ny sisin-tany
Mivelatra amin’ny sehatra maro, toy ny toekarena, ny kolontsaina, ny fanenjehana an’ireo tambajotran-jiolahy ivondronana Malagasy sy Kaomôriana, fa indrindra ny fiarovana ny harem-pirenena sy ny sisin-tany ity fifanarahana nosoniavina tany an-toerana ity.
Nambaran’ny Praiminisitra, Ntsay Christian, izay sady minisitry ny Raharaham-bahiny mpisolo toerana fa: “mila mifanome tanana amin’ny fiarovana ny sisin-tany ny firenena roa tonta satria hiantoka ny fivoarana ara-toekarena izany. Tsy azo adinoina fa nosy isika, hoy izy, ka mila harahina maso ny fandriampahalemana an-dranomasina mba hiantohana ny fifezivezen’ireo sambo sy ny ain’ireo mpandeha”.
“Vonona hifampizara traikefa amin’ireo tantsambo Kaomôriana ny sekoly fampiofanana tantsambo ao Mahajanga (ENEM)”, hoy izy.
Fivoriana tetsy Tsimbazaza :: Lany hitarika ny vaomiera faha-32 i Johasy Eléonore